Afovoany Atsinanana: Fanarahana maso akaiky kokoa ny Fitroatr’i Tonizia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2011 7:36 GMT
Ilay Syriana Abu Kareem, ao amin'ny Levantive Dreamhouse, dia manazava hoe inona no atao hoe ‘tan-dalàna’ mikasika ny fitroatry ny Toniziana amin'ireo Arabo mpiray vodirindrina aminy. Hoy izy:
Namaky ny fahanginan'ny bilaoginy tamin'ny hiaka hoe HO ELA VELONA I TONIZIA! (VIVE LA TUNISIE!) ilay Bahraini Emoodz
Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoeTonizia, Porofoy aminay fa diso izahay, dia mametraka izao fanontaniana manaraka izao i Saudi Hala_In_USA :
Vokany, nitodika tany Tonizia avokoa ny maso rehetra teo amin'ny tontolo Arabo, izay angamba mety ho fiantombohana vaovaon'ny demokrasia mbola tsy nisy teo aloha teto Afovoany Atsinanana ve ity? Mety hitarika ny firenena hafa ve izany? Na hianjera eo ambany vahohon'ny Islamista na olona hafan-dry Bin Ali fa amin'ny endrika samihafa?
Manana fahatsapana misavoritaka momba ity resaka ity aho , sady koa mizara ny tebitebin'i Robert Fisk momba ny marina mampivarahontsana, hoe ny firenena eo amin'ny faritra toy ny any Andrefana dia mety tsy hahazaka mihitsy ny atao hoe tena demokrasia marina any Tonizia, noho ny tahotra hoe mety hitondra vokatra tsy tsara izany, ka ny olona eo amin'ny fahefana tsy hanaiky afa-tsy ny fanjakana Arabo izay mety hanohana ny tombontsoa tsaran'ny Tandrefana, ny fankahalàna an'i Iran ary ny fitondrana mangeja ny vahoakany… Na izany aza, mbola mino aho fa nahazo tsara ny lesona mikasika ny tsindry hazo lena sy ny kolikoly ny Toniziana, fa tsy ho adinon'izy ireo mora foana ny vatan'i Bouazizi nirehitra afo, ho tsaroan'izy ireo foana ireo andron'ny famoretana, ny fahantrana, ary ny fidiram-bola voafetra nentin'ny rafitra tsy refesi-mandidy, manantena aho fa i Tonizia no ho mpisava làlan'ny vanim-potoana vaovao, hahita ny fahamarinana sy ny traikefa voalohany amin'ny governemantam-bahoaka, hanaporofo amintsika fa diso isika, ary hanaporofo fa tena manana safidy ny vahoaka, afaka manana safidy sy afaka mamboatra hoavy tsaratsara kokoa ho azy ireo…
Ilay Alzeriana-Amerikana Kal, manoratra ao amin'ny The Moor Next Door, ihany koa dia miahiahy. Hoy izy manoratra:
Manara-maso akaiky ihany koa ny Syriana Qunfuz ny amin'ny “fiantraikan'ny fianjerana daomy ” mety ho hisy na tsia eo amin'ny faritra. Hoy izy manoratra:
Raha misy ny fianjeran'ny daomy, dia tsy ho izao dieny izao ary tsy ho toy izany ny fandehany. Tsy hamela fitroarana iray anaty firaisankina mba hanoherana governemanta raha ny fahitàna ny zava-misy amin'izao fotoana any Irak. Na izany fomba fiteny izany aza tsy mety. Any Syria, tena malaza be tsy misy hoatr'izany ny filoha, eny fa na dia tsy toa izany aza ny fitondrana manodidina azy. Ary raha hoe tena mitsoaka amin'ny fomba mampalahelo ny filoha noho ny sitrapon'ny vahoaka, dia matahotra ny Syriana hoe hitondra amin'ny adim-poko sy ny firotsahan'ny Israeliana ny revolisiona– mety zavatra hiseho daholo ireo roa ireo. I Arabia Saodita indray dia diso mitsitokotoko loatra, ary sampana maro ao anaty fiarahamonina no mahazo vahana, ho an'ny fisamantsamahan'ny revolisiona. Ny vahoaka tena tezitra mafy ao anatin'io fanjakana io dia ny vondrom-piarahamonina Shia izay iharan'ny tsindry hazolena, nefa izay hetsika avy any amin'izy ireo dia hisedra fanoherana mafy avy amin'ny Wahhabi. I Bahrain, miaraka amin'ny ankamaroan'ny Shia voatefy ara-politika sy manampahaizana miatrika nySunni, fianakaviana mpitondra sy mpanindry, dia toa isan'ny kandida ho amin'ny fiovàna. I Ejipta no tsy fantatra. Amin'ny lafiny iray, efa nanàko ny fialàn'ny fitondràn-jiolahin'i Mubarak. Etsy ankilany kosa, Ejiptiana maro no tsy manam-potoana hieritreretana afa-tsy ny haniny rahampitso. Tsy manaraka ny zava-misy amin'ny Facebook, eny fa na dia amin'ny al-Jazeera aza ry zareo. Ary afaka mahazo antoka isika fa hiteraka faty olona anjatony ny fanandramana revolisiona iray goavana malaza any Ejipta. (Nefa afaka miseho amin'ny endriny maro izany – tsy misy miteraka revolisiona hoatry ny fandevenana misesisesy. Jereo ny sarin'i Ali Farzat etsy ambony.)
Mandritra izany, miverina any Bahrain, manahy i Mahmood Al Yousif fa niala avy amin'ny tendro iray ho amin'ny iray hafa tanteraka i Tonizia amin'izao fotoana izao. Hoy izy manoratra: